RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Man City ka badisay Watford… (Sky Blues oo garoonkeeda Etihad ku adkaatay markii ugu horreysay tan iyo bishii…) – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Man City ka badisay Watford… (Sky Blues oo garoonkeeda Etihad ku adkaatay markii ugu horreysay tan iyo bishii…)
Haaruun December 15, 2016
(Manchester) 15 Dis 2016 – Manchester City ayaa guul ka gaartay naadiga Watford oo ay ku soo dhawaysay garoonkeeda Etihad kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana ay uga badisay 2-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Man City ayaa dheereysatay hoggaanka ciyaarta waxaana goolka labaad u dhaliyey Sky Blues xiddigooda David Silva 86’daqiiqo kaddib caawin uu ka helay Sterling, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-0 ay ku adkaatay Man City.
>- Manchester City ayaa markii ugu horreysay kulan ka tirsan horyaalka Premier League ku adkaatay garoonkeeda Etihad tan iyo 17 bishii September.
>- Pablo Zabaleta ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey Man City muddo 736 maalmood ah kaddib, waxaana goolkiisii ugu dambeeyey midkan ka hor uu dhaliyey 10 bishii December sanadkii 2014 kulan ay ka horjeedeen Roma.
>- Kevin De Bruyne ayaa loo diiwaan galiyey inuu 8 gool caawin ka sameeyey horyaalka xilli ciyaareedkan, mana jiro ciyaaryahan ka badan marka la eego shanta horyaal ee ugu wayn qaaradda Yurub.
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Liverpool ka adkaatay Middlesbrough ee Premier League
MUUQAAL: Jose Mourinho oo xalay si wayn ula dabaal degay xiddigaha Man United